Google Earth wuxuu cusbooneysiiyaa orthophoto, Abriil 2008 - Geofumadas
Abriil, 2008 Cartografia, Google Earth / Maps
Google ayaa ku dhawaaqay cusboonaysiinteeda bilowga Abriil 2008, si kastaba ha noqotee waxaan kugula talinayaa inaad dib u eegto waddammadaada maadaama wax walba oo la cusbooneysiinayo aan la shaacin; ugu dambeeya waxay ahayd waqti dambe laga bilaabo Janaayo. Google wuxuu kaliya ogeysiiyaa wadamada lagu cusbooneysiiyay sawir dhawaan, sidaa darteed waxay u muuqataa, iyaga dhexdooda inay ku xustay Panama, Cuba, Argentina, Bolivia iyo Spain oo ka mid ah dalalkeena Hispanic.
Xaaladda Honduras lama sheegin, waxaanan u arkaa inay cusbooneysiisay muuqaalka qaraarka sare leh (haddii lagu magacaabi karo orthophoto) meelaha soo socda:
Wadada Waddada Galbeed
Qaybta oo dhan ka socota San Pedro Sula, maraya Walaal, Chinda, Trinidad, Petoa. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa jiray afar meelood oo daboolaya San Marcos iyo Quimistán. Marka wadadaas la raaco ayaa ah Sula, Macuelizo y Azacualpa inkasta oo sheyga aaggaasi xoogaa daruur yahay iyo kala-goysyada leh muuqaalkii hore waa sida waan ognahay (miisaan xoogaa ah oo 30 ah)
Caymiskaas wuxuu ku eg yahay dhammaadka waaxda Santa Barbara, markaa waxaa jira wax badan oo soo socda Burburkii Copan, magaalo hadda leh dhammaan caynsanaanta. Waxa kale oo jira jid fidsan oo wanaagsan oo loo maro Santa Rosa de Copán, oo magaalada oo dhan waa la daboolay.
Waxa kale oo aad arki kartaa xariijin wanaagsan oo ka socota koonfurta ilaa woqooyiga qaybta comayagualaakiin maahan Mines Gold , Wadada loo maro Puerto Cortes, meelaha qaarkood Olancho wuxuuna bilaabaa inuu arko wax ka badan Jannada... war aad u wanaagsan.
Waxaa la ogaaday in isbedelka Google uu yahay in la cusbooneysiiyo aagagga saameynta lakabka waddada, iyo kuwa kale ee soo socda si aan qosol u nadiifino si aan u iibsano sawirka.
Markaa hubi wadamadaada sababtoo ah tani waa wanaagsan tahay ... ma aha in la qabto shaqooyin sarsare oo sareeya laakiin degmooyinka leh kheyraad xaddidan waa qalab faa'iido leh.
Wakhti yar, Google rasmi ah Cusboonaysiinta, halkan waddamada nagu wareegsan ... markaa annagu xumaan uma nihin.
- Isbaanish: Guadalajara, Almunecar, Almagro
- Meksiko: Tehuacan, Poza Rica, Cordoba, San Cristobal, Tulancingo, Comitan, Guanajuato, Texmelucan, Valle Hermoso, Etzatlan, Ocotlan, Bernal
-Cuba: El Cobre, Puerto Padre, Santa Lucia, Trinidad, Manicaragua, Placetas, Rhodes, Guines, Artemisa, Guanajay, Consolacion del Sur Sur
-Colombia: Barrancabermeja, Cartaga, Magangue, Piedecuesta, Ipiales, Plato, Pajuil, Pitalito,
-Brazil: Santa Maria, Taubate, Angra dos Reis, Alagoinhas, Garanhuns, Santa Cruz samayn Sul, Catolina, Cruz Alta, Congonhas, Rolandia, Leopoldina, Itaqui, Panambi, Rio Pardo, Piraju, Santa Quiteria, Ibirama, Orleans, Cristalina, Garanhuns, Arapiraca , Armacao dos Buzios, Peruibe, Vacaria
- Guatemala: Puerto Barrios, Coban, Kaniisad, San Marcos, Soloma, Chiquimula
- Nicaragua: The Old Man, Bluefields, Boaco
- Chile: Muuqaalka 2.5m ee qeybta waqooyiga ee dalka
Post Previous" Hore AutoDesk waxay bilaabi doontaa AutoGIS Max?
Post Next 7 Computer ComprasesNext »
2 Jawaabo "Google Earth oo cusbooneysiinaysa sawir-qaadis, Abriil 2008"
Hello Raul, waxay u muuqataa in Google Earth ay si fudud ula shaqeyso bixiyeyaasha xogta ee waaweyn, laakiin boostadan waxay muujinaysaa in ay suurtogal tahay in ay sameyso qaar ka mid ah isu soo dhawaansho leh alaab-qeybiyeyaasha yaryar ama wadamada macaamiilka ah
taas oo lagu arki karo kormeer sahlan, halkaas oo qaar ka mid ah dalalka madaxbanaan ee Spain ama gobollada Mareykanka ay leeyihiin dhammaan xiritaanka xallinta sarreeya iyo xitaa nabbad kale oo la dareemi karo
Su'aal aad u muhiim ah:
Waa maxay habka casriyeynta Google? Iyagu ma soo iibsadaan sawirradii ay soo iibsadeen waddan kasta?
Salaan iyo kun oo mahad,